Ã‚Â· Mohamad Farah Aidid
Ã‚Â· Adan C/lahi N. Gabyow
Ã‚Â· Osman Hassan Ali Atto
Ã‚Â· Col. Barre Hiiraale
Ã‚Â· Husien M. farah Aidid
Ã‚Â· Gen. Axmad Warsame
Ã‚Â· Ali Mahdi Mohamed
Ã‚Â· Hasan Muhammad Nur
Ã‚Â· Muuse Suudi Yalaxow
Ã‚Â· Ahmed Omar Jess
Ã‚Â· Abdullahi Yousuf Ahmed
Ã‚Â· Omar Haji Mohamed
Ã‚Â· Huseen Haji Boot
Ã‚Â· Mohamed Said Hirsi
Ã‚Â· Mohd Qanyare Afrah
wacan oo wanagsan waxaad ku soo dhawaataa qaybta aan ugu tala galay in aan wax kaaga qorano siyasiyiinta somaliyeed (Dagaal oogayaasha).
Qarnigii 19 oo hatan dhamaday wuxu ahaa qariga qudha ee dowladaha aduunku is wada gaareen aya ka baxee gacamaha dadka shi sheeye haday noqoto gumaysi iyo haday noqoto baahi dhaqaleba waa Qarniga cirka loo diray diyaradaha oo xitaa dayaxa dad loo diray taas oo ku tusaysa in dunida dhamanateed ay wada kacday meel wayan gaadhay lakiin nasiibdaro Somalidu waxa qarnigaa qiimaha badna ka dhaxashay oo meel u yaal oo waang ahi ma jiran.
Biwogii qarniga waxay ku jiraan dhib iyo baqdin taas o ka timid gumaystihii waqtiga somaliya xukumayay oo kal haa Ingiriis, Talyaani, iyo Faransiis.
Markii laga baxay gcantii gumaystaha waxaa somalia laga filaayey in ay noqoto wadanka ugu sareeya Afrika lakiin ugu danbayntii waxay ku soo gabaagabawday xukun keligii tali yey ah iyo nacab dil iyo wixii lamid ah taas oo dhaantay maanta tay ku jiraan maanta Somali waxay ka mid tahay amaba tahay wadanak aduunka ugu liita, labada wax ee dowaldha aduunku ku shaqaystaanba Somalia kama shaqeeyaan Tan kooda Malaha wax dowlada ah oo sal iyo raad leh Tanalbad wax dhaqale ah malaha wax dad ah oo u rodayan malaha taas oo ga dhigtay meel aal la tirsan laguan tilmaam meel ay galaan Warabayaasho.
waa ku wee rabayaashu waa kuwa bur buriyey somaliya waa dadkii madaxda ka haa oo bilaabay qaskan iyo dhibtan ay ku jito maanta Somali.
Siyaasadu waa sil silada dolwada haday qaloocsantana lama toosin karo maxaa yeelay mid kasto siyaasi ahai ama ha ahaado mucarad am araaciyee dowaldu wa ku dhisan tahay lakiin hadii ay hal dhinca u bataan way dhacdaa waxan kugu cadana ah Somaliya markii dowaladii Siyaad beri meel ay u ga soo wada jeesteen Siyasiyiintii la socan jiray waata maanta badaya dhismina wayday.
Dagaala naaguhu bilaaban iyo dagalaka siyasiga caqliga xumi bilaabo midna ma qaboobo sabtu tahay naagian waxay ku mintidaa sidii ay u guul gaari lahayd siayasina wuxuu ku mintidaa siduu keligii ku guul gaari lahaa.
haatan iyo dan maxaa u dan ah Somali Waxaay ila taha wax qudha ee ay Somali ku hagagayso waa siyaasiyiinta oo la badalo oo lagu bedelo dhalin yaro sidii (SLY) dhalainyaradii qaday xornimada bal waxaad dib u raacda Sayidikii Sayd ku wuxu ahaa nin xornimada u dagalama oo shida galada lakiin dagalkii wax ma ku helay maya kumuu helininkastoo uu xarbiyey markii danbe daraawiishi way iska kal carareen wayana baabaeen . lakiin 15 kii wiil ee dhalain yarada ha ee qalinka iyo siyasada cusub ku dagalamayey maxa keenen waxay keena gobobnimo taas waxaad ku garnaysaa siyasadu makray duugowdo oo dadka wada wax ku keeni wayaan in ay uga tagan dadka soo korayao oo cilimiga cusub ku xoojinaya siyasada lakiin nin ruug cada ha oo salg jeer wax biyey oo sagal kalein u soo socda muxu kenyaa an ahana dhib iyo baaba.......
Taariikhdi Muuse Suudi Yalaxow
Jan 9, 2005 Radio Free Somalia
Qeybti ( IIII )
Taariikhda Muuse Suudi Yalaxow mabadna, haddana leyskama indha tiri karo maadaama uu ka muuqdo masraxiyadda siyaasadda cajaa ibta leh ee Soomaaliyeed, wuxuuna ku can baxay mucaaradnimo joogta ah.
Muuse wuxuu todobaatameeyadi ka xoogsan jiray suuqa Madiina, ka dibna wuxuu isu baddelay darawal, bartamihi sideetameyadi taasoo uu ku dhaqnaa tan iyo gunaanadki xukuumaddi Maxamed Siyaad Barre.
Sida la sheegay Muuse wuxuu u soo hoyday magaalada Muqdisho 15ki Oktoobar 1969, maalintaasoo ah maalinti ay dhuntay Dimuqraadiyaddi Soomaaliyeed. Waxaa iilka u hoyday Madaxweynihi ummadda mudane Cabdirishiid Cali Sharmarke, geesigi sida asluubta leheyd ugala wareegay xilka ummadda mudane Aadan Cabdulle Cismaan.
Waxgaradka Soomaaliyeed waxay ku tilmaameen bilowgii maalmaha qalloocan, Muusana wuxuu u muuqday mukulaashi madoobeyd ee mininka soo gashay, sida ay yiraahdaan reer Muqdisha “ MAQRIBTII MUKULAAL MADOW MININKAADA SOO GASHO MASIIBO KUUMA DHIMMANA “. Muuse wuxuu ku indha furtay maamul xoog iyo qoray ku shaqeeya, dadkoo la cabsiiyo, xurriyadda laga qaado, hantidooda oo lagala wareego iyadoo loo cuskanaayo sharciyo cusub oo isla maalintaas la soo arla geliyay.
Guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaanna ummaddi ku dhaqneyd magaalada Muqdisho, hoog iyo ba’ugama horreeyn maalintaas, dad badanna waxeey isweydiiyeen, intee nagala soo galay.
Illaa iyo maantana su’aashi waa ay taagan tahay, waxaase marag ma doonta noqotay inuu Muuse masiiba la daba taagan yahay magaalada Muqdisho, muraayaddi waddankenna, maamulkasta oo loo sameeyana uu mucaarado. Kolki hore wuxuu cagta-cagta u saaray maamulki uu madaxa ka ahaa Dr. Xuseen Cali Axmed, maantana kii Dr. Cadde Xassan Cali Gaaboow.
Qeybti ( V )
Muuse Suudi Yalaxow wuxuu mudan yahay in lagu qoro buugga lagu magacaabo “GUINNESS WORLD RECORDS”, buuggaasoo lagu qoro dhacdooyinka ugu yaabka badan iyo dadki sameeyay.
Muuse wuxuu nasiib u yeeshay inuu noqdo Xildhibaan ka tirsan mudanayaasha Barlamaanka Federaalka Soomaaliyeed una dheer tahay Wasiirnimo asagoon wax aqoon ah laheyn amaba soo marin waxbarasho ceynkey noqotaba. Waa wax aan maangal aheyn haddana waa ay dhacday.
Waxaa marag madoonto noqotay in jagooyinkaas ay ku yaraadeed Muuse, uuna door biday inuu ku darsado Guddoomiyanimada gobolka Banaadir. Muuse wuxuu geed dheer iyo mid gaabanba u fuulay siduu ku hanan lahaa.
Muuse Suudi, asagoon taariikhdiisa dib u eegin ayuu garab ka doontay mudanayaasha kala ah Cali Mahdi iyo Cabdilqaasim Salaad, kubaas uu ka jallaafay dawladahoodi ku meel gaarka ahaa, kama eysan waalinnin, waxayna ugu soo hadal qabsadeen “USOO AROOR AADAN YABAAL ABAALNA KUUMA ERGANEE”.
Kadib wuxuu beegsaday rag ay ka mid yihiin Bashiir Raage, Ingineer Eenow iyo Cabdulqaadir Beebe, wuu ku hungoobay, wuxuuna kala kulmay diidada qeyixan. Waxay dhegtiisa ku dhibciyeen inuusan gobolka Banaadir u baahneyn laba maamul oo isbar-bar socda, dhibaata cusub iyo iska hor imaad dagaal.
Muuse Suudi asagoon quusan ayuu waajahay Ingineer Maxamed Xuseen Caddow, jawaabti la siiyayna waxay noqotay “XAAJI KABA KAA WAAWEYN, AADAN KU SOCON KARIN AYAAD ILLATAY”, gobolkuna maamul ayuu lee yahay, guddoomiyaha sharciga ahna waa Dr. Cadde ee shaqadi laguu soo xilsaaray ka fiirso.
Madaalaha, tii ugu darneyd wuxuu kala kulmay Mudane Shariif Xassan, guddoomiyaha Baarlamaanka, kaasoo ku yiri “XAAJI WAAD GUDUBTAYE, DIB USOO NOQO”, ereyadaas, Muuse ma’uusan ka helin, laakin wuxuu muujiyay nin qoyani biyo iskama dhowro, taasoo uu weli riyo maalmeedki uu ku dhex jiro.
Qeybti ( VI )
Muuse Suudi Yalaxow oo quus taagan ayaa Madiina Generaale u iftiimisay inuu Cabdilqaasim Salaad Xassan ka helaayo gargaar dhinac walba ah, laakinse uusan dooneynin inuu ka muuqdo masraxiyadda loogu ololeynaayo jallaafidda dowladda Federaalka Soomaaliyeed. Taasi ma’ahayn mid lala soo jeclaaday Muuse ee waxay ka dambeysay fashilaaddi ina Salaad Booy uga timid dhinaca Jubbooyinka iyo Shabeelaha Hoose, kubaasoo qoorshahiisa diiday, lana saftay dowladda Federaalka ah.
Muuse oo aanan fahmin sida arrimuhu isu daba marayaan, farxaddana ka badatay ayaa go’aansaday inuu howshiisa soo dedejiyo, Madiinana ugu abaal gudo u magacaabidda guddoomiyaha maamulka cusub ee gobolka Banaadir.
Sidi lagu yaqiinnay Muuse, ka fiirsasho la’aan ayuu u maalgeliyay sidi xaflad loogu sameyn lahaa soo bandhigidda qoorsha ka dhanka ah dowladdi uu ugu soo dhaartay magaca Ilaah.
Xafladdi oo dhacday 25ki Disembar 2005, waxaa si lama filaan ah uga dhinac muuqday Cabdilqaasim Salaad Xassan, kaasoo mar qura ummaddi Soomaaliyeed ku riday fajac, amakaag iyo wax laga naxo.
Inkastoo ay taariikhdu waxna ka tegeyn haddana Cabdilqaasin Salaad Xassan wuxuu ku baal noqday Muuse Suudi Yalaxow, wuxuunna muteystay in aqoontiisa wax laga sheego iyo falka gurracan oo aanan laga fileyn nin lagu tilmaami karo waxgarad aqoon leh.
Qeybti ( VII )
Muuse Suudi Yalaxow oo aanan xirfad u lahayn siyaasadda, nasiib darrana u dheer tahay, uu aqrin karin haddii uu ka faa iideysan lahaa war-sidayaasha iyo bogagga Internet-ka wixi dhacdooyin, digniin, guubaabo, talo iyo wixi la mid ahba ay qoraan Soomaali weynta isugu jirta aqoon-yahanno, culumaa uddiin, siyaasiyiin, waxgarad da'walba leh, kana kooban rag iyo dumar. Muuse waxaa intaa u dheer xaq darro ka indha iyo dhaga tirtay hagardaamada lala raadinaayay.
Muuse Suudi wuxuu sannadka 2006da ugu dhashay waji gabax iyo goob cidla’ah, wey u noqon weeyday sidi uu rabay iyo si u dhowba, dadki uu xaq darrada ku aaminay, kana doorbiday dadkiisi ayaa ugu jawaabay Xaaji xoolaha waa leysla jiray waana lakala jirtay ee qeybtaada bal meesha ka deydeyo, ka dib markey sufur ku ogaadeen. Waxaa herta cad si abaal marin ah dhulka ula dhacay ina Salaad Booy ka dibna si aan abid la maqal ugu digtay ina Qanyare.
Muuse Suudi Yalaxow oo aanan wanaag meelna dhigan, umaddana ka dheregsan tahay ninka uu yahay, mooryaanti uu ku hanjabi jrayna ay ku gadooddaay, goob cila ahana uga dhaqaaqay, gaba-gabadi taariikh nololeedkiisana ku jiro ayaanan la ogeyn gunaanadkiisa.
Waxay dad badan isweydiinayaan ma asagaa iska taqalusi doona mise ragga ay siyaasadda isaga hor yimaadeen ayaa u dheereyn doona. Halka dadka qaarkiis ay leeyihiin mawaxaa looga aargudi doonaa dadki uu laayay mise kubi uu sigay.
Dadka qaarbaaba leh ma dawladda Federaalka ah ayaa maxkamad soo saari doonta mise Interpol ayaa gacanta ku dhigi doonto oo horkeni maxkamadda Heig. Waxaase looga baqaa in dawladda Mareyka la wareegto oo Guantanamo Bey laga sheego.
Sidey noqotaba taariikhda ayaa meel ku sheegi doonta.
Laakiin, isla sannadkii xigay ee 1987-dii waxa uu khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo madaxweyhinii dalka, taasoo keentay in laga qaado wasaaraddii gaashaandhigga ee xogga badnayd isla markaana loo dhiibo wasaaradda Dalxiiska oo iyadu markaasi loo arkayey in lagu asturo siyaasigii laga xishoonayo isla markaana aan loo haynin jago muhiim ah, dabadeedna waxaa looga sii gudbiyey wasaaradda madaxtooyada oo ayadu lahayd dhowr wasiir oo aan wasaarado lahayn.
Khilaafkii Jeneraal Gabyow iyo madaxweynaha ayaa soo xoogeystay, waxayna taasi keentay in la xiro Jeneraal Gabyow sannadkii 1989-kii, laakiin maaddaama aysan dowladdu xilligaasi ku taagnayn lugo xoog leh ayaa waxaa durbaba Jeneraal Gabyow cafis loo fideyey isla markii uu billowday Kacdoonkii Muqdisho horraantii bishii Jenaayo ee sannadkii 1991.
Sida uu Cali Mahdi Maxamed ii sheegay Jeneraal Aadan Gabyow waxa uu ahaa nin xagga siyaasadda mar kasta ay ula janjeertay dhinaca dib u heshiisiinta iyo dib u soo noolaynta Soomaaliya.
Ilaa intii uu billowday shirka hadda kooxaha Soomaalida uga socda dalka Kenya, waxa uu Cali Mahdi ii sheegay in uu Jeneraal Gabyow door muhiim ah ka ciyaaray isu soo dhoweynta dadka gaar ahaanna intii la joogay magaalada Eldoret, xilligaaso xitaa mar loo doortay guddoomiyennimada shirka.
Taariikhda C/raxmaan Tuur
Axmed Siciid Cige - BBCSomali.Com
Alla ha u naxariistee maydka marxuumka waxaa la keenayaa magaalada Hargeysa 13ka November 2003 oo si heer qaran ah loogu aasi doono.
TAARIIKH-NOLOLEEDKA MADAXWEYNAHA SOOMAALIYA MD. CABDULLAAHI YUUSUF AXMED
- Sunday, October 10, 2004 at 22:06
Madaxweynaha Dawlada Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Yusuf Axmed
Gaashaanle Sare - Ciidamda Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Taariikh Nololeed (Curriculum Vitae)
Madaxweynaha Midnimada iyo nabadda Dr. Cabdidqaasim Salaad Xasan
Magaca: Dr. Cabdiqassim Salaad Xassan
Meesha iyo Dhalashada: Dusa Mareb, 1942
Xaaladda Qoys: Xaas iyo Caruur
1959-60 Tababar Farsamo, Machadka Maamulka, Cairo
1960-64 Shahaado Jaamacad, Seynis Dabiici, Jaamacadda Dowladda Moscow (Moscow State University)
1964-65 Shahaado Takhasus, Jaamacadda Dowladda Moscow
1967-68 Shahaado, Machadka Maamulka iyo Maareynta, (SIPA)
Bare Jaamacadeed ee Waqti kooban, Istatuutada Jaamacadda Soomaaliya, ka dibna noqotay Jaamacadda Ummadda Soomaaliya.
2000- Xilligan: Madaxweyne, Dawladda KMG ee Soomaaliya
1990-91: Ku Xigeenka Raiisal Wasaaraha ahna Wasiirka Arrimaha Gudaha
1989-89: Wasiirka Ganacsiga
1988-89: Wasiir, Xaafiiska Madaxweynaha
1985-87: Wasiirka Howlaha Guud
1982-83: Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada
1981-82: Wasiirka Tacliinta Sare
1980-81: Guddoomiyaha, Guddiga Arrimha Dibadda ee Baarlamaanka
1977-79: Wasiirka Dhalinyarada iyo Isboortiga
1976-77: Wasiirka Warfaafinta
1973-76: Wasiirka Warshadaha
1971-72 Maareeyaha Guud, Cuntada Degdegga ah (Crash Programme)
1968-69 Bare, Dugsiga Sare Dhagaxtuur
1966-68: Madaxa, Cilmi Baarista Beeraha
Qoraallo kale duwan: Cilmiga Beeraha, Taariikhda Soomaaliya iyo Siyaasadda
Mudane, Dr. Cabdiqassim Salaad Xasan wuxuu joogay Soomaaliya muddo badan intii dagaalka sokeeye jiray. Muddadaas dhibka badneyd, Mudane, Dr. Xasan wuxuu u istaagay in uu gacan ka geysto dib u heshiisiinta kooxihii kale duwanaa ee dalka ku dagaalamayey. Wuxuu hantay kalsoonida ummadda Soomaaliyeed oo ay ka mid ahaayeen odayaal dhaqameedka, ururada bulshada iyo hogaamiye kooxeedka. Taasi waxay keentay in badan oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ay ku qanciyeen Mudane Cabdiqaasim in uu isku sharaxo madaxnimada Soomaaliya shirkii lagu qabtay Carta, dalka Jabuuti, 2000, taas oo uu si fudud ugu adkaaday Madaxweynanimada Ummadda Soomaaliyeed. Mudane Cabdiqaasim wuxuu mar kale u taagan yahay jagada Madaxweynaha Soomaaliya, doorashada lagu qabanayo, Nairobi, Kenya, si uu u dhameystiro dib u heshiisiintii uu bilaabay iyo barjaamijkii dhaqaalaha, bulshada iyo horumarka Soomaaliya.
Cabdi qaasin waxaa kala wareegay madan tinimadii C/alaahi yuusuf ahmed oo ku soo baxay doorashdii cusbay ee dhacay 10/10/04
Maxamed Ibraahim Cigaal oo geeriyooday
Marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal.
Axmed Siciid Cige- London
Waxaa maanta magaalada Pretoria ku geeriyooday, Madaxweynaha Somaliland, Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal.
Maxamed Ibraahim Cigaal oo ay da'diisu tahay ku dhowaad siddeetan sano, waxaa uu Soomaaliya ka soo noqday Ra'iisal Wasaare lixdamaadkii.
Warkan waxaa BBC-da u xaqiijiyay Wasiirka warfaafinta ee Somaliland Cabdullahi Maxamed Ducaale
Yaraantiisii waxuu ku barbaaray magaalooyinka Burco, Berbera iyo Sheekh, oo uu ku dhameystay waxbarashadiisii malcaamadda qur'aanka ilaa iyo dugsiga Sheekh.
10-kii July 1967-dii, wuxuu noqday Cigaal ra'iisul-wasaaraha Soomaaliya, markii Cabdirashiid Cali Sharma'arke loo doortay xiligaasi madaxweynihii Soomaaliya.
Cigaal mar kale ayaa loo doortay jagadaasi ra'iisul-wasaaraha doorashooyinkii 1969-kii .
21 Oktoobar 1969-kii markii inqilaabka milatari oo uu hogaaminayey Maxamed Siyad Barre, uu ka dhacay Soomaaliya, Maxamed Ibraahim Cigaal waxuu ahaa Ra'iisul wasaarihii ugu dambeeyey ee dowlad soomaaliyeed oo la doorto, waana la xiray, wuxuuna Cigaal Xabsiga ku jiray ilaa iyo 1981-dii bishii February, marka laga reebo muddo sanad ka yarayd oo ahayd 1975-tii ilaa iyo 1976-dii, oo mar loo agacaabay Danjiraha Soomaliya u fadhiya New-Delhi ee dalka Hindiya, kadibna islamarkiiba xabsiga ayaa lagu celiyey.
Ra'iisul wasaaraha cusub, Cali Maxamed Geeddi
Ra'iisul wasaaraha Cusub ee Soomaaliya, prof Cali Maxamed Geeddi, wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho sanadkii 1952-dii.
Wuxuu ra'iisul wasaaruhu waxbarashadiisa hoose, dhexe, sare iyo Jaamacadeedba ku qaatay isla magaalada Muqdisho, isagoo Jaamacaada Ummadda Soomaaliyeed kuliyadda daawada iyo xanaanada xoolaha ka baxay sanadkii 1978-dii, wuxuu kaloo wax ku bartay Jaamacadda Pisa ee dalka Talyaaniga, oo uu ka qaatay shahaadada Phd.
Wuxuu sanadkii 1997-dii ahaa sarkaalka suuqgaynta u qaabilsan Shirkadaha ganacsi ee Dayax iyo Ramadan oo ka shaqaynayay Muqdisho, Djibouti iyo Bujumbura (burundi).
Madaxwaynaha iyo ra'iisul wasaaraha
Mudane Cali Maxamed Geeddi, wuxuu ka qaybgalay shirar dib u heshiisiin Soomaaliyeed oo lagu qabtay gudaha dalka iyo dibadiisaba, waxaa ka mid ahaa shirkii 1997-dii hogaamiyayaasha siyaasadda Soomaalida ee lagu qabtay magaalada Qaahira oo uu ka ahaa la taliye.
Geddi's profile in English
Cabdullaahi Axmed Cadow wuxuu soo maray heerar kala duwan.
Danjire Cadow wuxuu soo qabtay jagooyin u dhexeeya askari ilaa jago wasiir oo uu ku soo qaatay inta badan waqtigiisa, gaar ahaan intii u dhaxeysay 1957 ilaa1990.
1965 wuxuu soo noqday agaasimaha guud ee wasaarada maaliyadda ee Jamhuuradda Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu waqtigan loo magacaabay in uu noqdo guddoomiyaha bankiga.
Markii uu dhashay maamulki militariga ahaa ee uu hor kacayay Jen. Max'ed Siyaad Barre, waxaa durbadiiba loo magacaabay safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiyo dalalka Mareykanka iyo Canada.
Kadib waxaa la soo badalay oo laga dhigay wasiirka maaliyadda, ayadoo uu xilkani haayay muddo afar sano iyo bar ah.
Dr. Cabdullaahi Axmed Cadow waxaa loo badalay in uu noqdo wasiirka madaxtooyada ee qaabilsan arrimaha dhaqaalaha.
Markii uu arkay maamulkii Max'ed Siyaad in siyaasadda dowladooda ay ka wiiqantan dhanka magaalooyinka Washinton iyo Ontoria, waxaa mar kale lagu soo celiyay mudane Cadow jagada safiirnamadiisii labadan magaalo.
Markii ugu dambeysay Cabdullaahi Cadow wuxuu ahaa wasiirka madaxtooyada ee arrimaha dhaqaalaha.
yaan ku dilin
Waxaad ka qabto ii soo sheeg badhan6@hotmail.com